Olee otú ka Wepụ Mmalite Mmemme na Windows
> Resource> Nyefee> Olee Wepụ Mmalite Mmemme na Windows
Esi wepụ omume si "mmalite" na windows XP?
Enwere m ọtụtụ ihe ngwa na-amalite na bootup. Ma ha nwere ọtụtụ maka m. Achọrọ m ọcha ụfọdụ n'ime ha ka m nwere ike na-amalite na kọmputa m ngwa ngwa. M na-apụtaghị m chọrọ iji wepu ma ọ bụ hichapụ ha, ihe niile m chọrọ bụ na ha adịghị amalite na buut. Ihe ọ bụla echiche?
N'ihi na ụfọdụ omume, ọ bụ nnọọ smart buut ha na mmalite, dị ka antivirus omume, mgbe ụfọdụ na-adịghị mkpa, n'ihi na ha ga-eri nza nke ebe nchekwa gị na-eme ka gị mmalite nnọọ ngwa ngwa. Iji wepu mmalite omume, e nwere ihe a ngwá ọrụ nyere site Microsoft: MSConfig. Ị nwere ike iji ya iji gbanyụọ ndị ihe ị na-achọghị na-amalite na nnọọ begining ịkụda kọmputa gị mmalite.
Otú ọ dị, ụfọdụ ihe na-akpaghị aka na-agba ọsọ ndabere-apụghị nanị achọpụtara na wepụrụ si MSConfig window. Ọ bụrụ na ị na-ahụ na kọmputa ka amalite iji nwayọọ, i kwesịrị a mmalite omume remover ngwá ọrụ iji wepụ ha n'ụzọ doro anya. Ọ bụrụ na ị na-adịghị a oke ugbu a, i nwere ike m nkwanye ebe a: Wondershare WinSuite 2012. Nke a Windows mmalite ihe remover ngwá ọrụ pụrụ inye aka chọta niile mmemme zoro ndabere na-enye gị ohere iji gbanyụọ ha na otu Pịa.
Step1. Gbaa ndị Windows mmalite omume wepụ software
Mgbe wụnye usoro ihe omume, na-agba ya na kọmputa gị. Pịa "Lelee & TuneUp" n'elu na-aga "Mmalite Management" na n'aka ekpe menu n'okpuru "Windows Speedup", wee pịa "Mmalite Management" nọgide na.
Step2. Ego na-ewepụ mmalite mmemme na-abaghị uru
Ebe a, gaa na "mmalite Manager", nke nwere ike ịchọpụta gị niile na omume na-agba ọsọ na-akpaghị aka mgbe Windows amalite. Ị nwere ike ịlele ha otu otu, ma chọpụta ndị ị na-achọghị na pịa ka "gbanyụọ" ha na otu Pịa.
E wezụga "Mmalite Manager", e nwere bụ a "Bootup Optimizer" nhọrọ. Ị nwekwara ike iji ya na-ebelata mmalite oge na diski ike ịchọputa oge, nke nwere ike ime ka gị na kọmputa na-amalite dị ka na-efe efe.
Windows 7 Mmalite Manager: buut Your Computer Faster na Securer
5 Ihe Ị nwere ike ime mgbe kọmputa gị ga bụghị buut Up
Top 3 Samsung File Nyefee Software
Jiri iTunes, iCloud na Wondershare TunesGo nkwado ndabere na mpaghara iPad
Otú nyefee faịlụ site PC ka Nexus 5
Otú nyefee Ndi ana-akpo ka Nexus 4
Olee otú Detuo Ndi ana-akpo SIM Kaadị na Android Ngwaọrụ